Raysulwasaaraha Soomaaliya oo sheegay in shirka asbuuclaha ah ee golaha wasiiradda uu ka dhici doona magaalo xeebeedka Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha Soomaaliya oo sheegay in shirka asbuuclaha ah ee golaha wasiiradda uu ka dhici doona magaalo xeebeedka Kismaayo
July 10, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirka asbuuclaha ah ee golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa ka dhici doona magaalo xeebeedka Kismaayo, sida uu sheegay Raysulwasaaraha Soomaaliya.
Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay gudaha Muqdisho, Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in shirka golaha wasiiradda uu ka dhici doono magaalo xeebeedka Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya.
Ujeedada ayaa ah xoojinta xiriirka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada, sida uu sheegay Raysulwasaaruhu.
Shirka ayaa lagu qaban doonaa Kismaayo maalinta Khamiista, dhammaan wasiiradda ayaa la filayaa in ay ka qeybgalaan.
Sidoo kale, shirarka xiga ee golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa la filayaa in lagu qabto caasimadaha Dowlad Goboleedyada Soomaaliya, Raysulwasaaraha ayaa intaas ku daray.
September 21, 2017 Golaha wasiiradda Soomaaliya oo ayiday go’aankii ay Soomaaliya ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka
July 11, 2017 Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo lagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow Garoowe
July 31, 2017 Madaxweyne Farmaajo oo saraakiisha ciidamada kulan kula yeeshay Muqdisho
October 25, 2017 Raysulwasaaraha Soomaaliya oo u safray Turkiga
Somalia’s weekly cabinet meeting will take place in Kismayo, PM says
Unknown warplanes seen flying over remote areas near Garowe
Oil tanker released by Somali pirates arrives at Bosaso port
Garowe-(Puntland Mirror) An oil tanker, Aris 13 with eight Sri Lankan crew on board, arrived at Bosaso port in Puntland after five days in captivity at the hands of Somali pirates, Puntland maritime forces official confirmed [...]
Dowladda Soomaaliya oo ku amartay wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya in uu dalka uga baxo saddex beri gudahood
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka haayada FAO u qaabilsan Soomaaliya Richard Trenchard in uu ka baxo dalka, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dowladda katirsan. Ilo-wareedyada ayaa sheegay in wakiilka Soomaaliya u jooga FAO [...]
Erdogan: Saldhiga Turkigu waa u jirayaa ilaa inta Qatar ay rabto
Ankara-(Puntland Mirror) Turkigu ma uu xiri doono saldhigiisa milatari ee kuyaala gudaha Qatar, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay warbaahinta Faransiiska. Erdogan ayaa sheegay in xiritaanka saldhiga uu ku imaan karo hal xaalad oo [...]